SHiinaha oo soomaaliya u balan qaadey mashaariic wax ku ool ah in uu ka fulinayo sida uu sheegey M/weynaha soomaaliya. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home facebook.com SHiinaha oo soomaaliya u balan qaadey mashaariic wax ku ool ah in...
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa faah-faahin ka bixiyay kulan gaar ah oo uu xalay kula yeeshay Madaxweynaha Jamhuriyadda Shiinaha, Xi Jinping magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika .
Xasan Sheekh ayaa sheegay in hoggaamiyaha Shiinaha uu ballan-qaaday inuu mashaariic badan oo dhinaha dhaqaalaha ah ka fulinayo guud ahaan Somalia, isla markaana la laba-laabayo iskaashiga labada waddan u dhexeeya.
Previous articleDHinacyada ku dagaalamaya G/mudug oo Ugas C/raxmaan Ugas KHaliif baaq u direy.
Next articleSoomaali ka kooban 28 qof una dhashey G/waqoyi bari kenya oo ay qab qabteen ciidamada amniga Kenya.